Otu esi etinye nleba anya Sistemụ Nleba anya na Debian 11 - LinuxCapable
September 22, 2021 September 11, 2021 by Jọshụa James
Otu esi eji Glances System Monitor
Gbaa nlebanya sistemu elegharị anya na ihe nchọgharị webụ
N'ime nkuzi na-esote, ị ga-amụta ka esi etinye na iji Glances na Debian 11 Bullseye.
Ngwungwu achọrọ: python, pip, psutils
Tupu ịwụnye Glances, ịkwesịrị ijide n'aka na ị tinyela ya Python 2.7 ma ọ bụ karịa yana psutil 5.30 ma ọ bụ karịa. Ọ bụrụ na i tinyebeghị nke ọ bụla, mee iwu a:
Nke a ga-etinye ndabere kachasị ọhụrụ site na iji ebe nchekwa ndabere Debian 11.
Iji wụnye Glances System Monitor na Debian, ịkwesịrị iji tinye ya PIP3. Iji mee nke a, mebie iwu a:
Mara, ị ga-achọpụta – isiokwu-ọcha ọkọlọtọ agbakwunyere na iwu ahụ, nyere Debian ndabere njedebe njedebe bụ ọcha; ọ bụrụ na i jiri iwu nlele ndabara bulite ya, ọ ga-adị aghụghọ ịgụ ma ọ bụrụ na ị gbanweela na ndabere ọcha na ndabara ka ọ bụrụ ojii.
Ọmụmaatụ na-eji iwu nlele anya ndabara:
Ọmụmaatụ na-eji iwu nlele -theme-white:
Rịba ama na ị ga-ahụrịrị na ngosipụta ọnụ "Nleba anya interface onye ọrụ webụ malitere na http://0.0.0.0:61208" mgbe ị na-abanye iwu a. Nke a nwere ike ịdị ntakịrị mgbagwoju anya, ma ọ na-eji adreesị IP nke ihe nkesa ahụ n'ezie.
Nyere nlele etinyere na iji PIP, ị ga-achọkwa ịlele mmelite site na iji iwu na-esote oge ụfọdụ:
Nke a ga-akwalite ihe ndị bụ isi. Agbanyeghị, a na-atụ aro ka ịme iwu a na-ekpuchi ihe niile:
Ma nke ahụ bụ ya; ọ bụrụ na mmelite dị, ọ ga-akwalite; ọ bụrụ na ọ bụghị, otu ụdị ahụ ga-anọrịrị.
Iji wepu anya na sistemu Debian gị, jiri iwu iwepụ PIP3 a:
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Nyochaa Sistemụ Nlele Mail igodo